Maxaa loola jeedaa sinnaanta? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks sinaanta
sinaanta waa qasab haddii aad rabto inaad iibsato guri ama iibsato iibsiyo waaweyn. Laga soo bilaabo miisaan gaar ah, waxaad maalgelin ka heleysaa hay'ad maaliyadeed haddii aad haysato lacag aad u sarreeya. Guud ahaan, sinnaanta badan, ayaa ka sii fiican. Tani waxay khuseysaa labadaba haddii aad rabto inaad dalbato amaahda deynta iyo sidoo kale shirkaddaada.
Noocyada kala duwan ee sinnaanta
Waxaad heli kartaa lacago kala duwan oo lagu daro amaahda deynta ah. Kaliya maaha amaahda iyo lacagta caddaanka ah ee lagu maalgeliyo hantida. In kiisas shaqsi ah, waa in aad go'aan mar walba marka la eego dhaqaale, taas oo macnaheedu yahay aad rabtid inaad keento in maalgelinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu talinayaa in aad isticmaasho oo kaliya maalgelinta marka gargaarka ah iyada oo loo marayo heerka amaahda faa'iido badan soo laabtay on your maalgashiga. Noocyada hoos ku xusan waxay leeyihiin:
[liiska] [*] amaah Bauspar
[*] Tilmaamaha Habboon (Musqulaha Maqalka)
[*] Amaahda Qaraabada
[*] Caymiska Life
[*] Sumarka caadiga ah
[*] Kuwa kale (amaahda maalgelinta dadwaynaha / gobolka, sheegashooyinka macquulka ah ee liddi ku ah dhinacyada saddexaad)
Dhismaha amaahda amaahda: Waxaad kugula wareegi kartaa qandaraaska dhismahaaga ee kaydka marxaladda kaydka bangigaaga adoon luminin. Qandaraas dhismaha oo aan weli la bixin ayaa sidoo kale loo heli karaa maalgelin ku meel gaar ah.
Self-service (Muscular Hypothecary): Baaxadda dib-u-habeynta iyo dib-u-cusboonaynta, Baanka wuxuu kaloo aqoonsanayaa tabarradaadaada oo ah suuq-galyo. Mushaharka saacaddii ee farshaxan waxaa loo isticmaalaa saldhigga xisaabinta guulahaaga. Kaalmada qoyska ee ay bixiyaan xubnaha qoyska iyo asxaabta ayaa sidoo kale la tixgelin karaa haddii aad bixiso caddayn in dadka ay leeyihiin xirfad ay ku siiyaan adeegyadda haboon ee xirfad leh.
Amaahda Deymanka ah: Haddii aad awoodid inaad sare u qaadid raasumaal dheeraad ah oo qaraabadaada ah oo aad dib u bixiso qiimaha adoon wax dhibaato ah lahayn, uma baahnid inaad ku wargeliso bangiga deynta la xiriira. Hawlaha deynta gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale si buuxda loo habeyn karaa.
Amaahda loo shaqeeyaha: Amaahda loo shaqeeyaha looma tixgeliyo amniga, laakiin wali waxay leedahay dabeecad sinnaan ah marka aad codsaneyso maalgelin. Ujeedada canshuuraha, waa inaad hubisaa in heshiiskaaga amaahda saxda ah lagu dhammeeyo adiga iyo shaqo-bixiyahaaga. Shuruudaha heshiiska, muddada, dib u bixinta, dulsaar iyo deynta waa in la isku raaco. Heerka dulsaarka waa inuu u dhigmaa celceliska dulsaarka dulsaarka ee Pfandbrief. Xadka qaarkood lama saari karo, sababtoo ah haddii kale waa faa'iido dhaqaale adiga.
Caymiska nolosha: iibinta caymiskaaga nolosha waa talaabo gaar ah oo adag. Beddelkeeda, waxaad ku dallaci kartaa caymiskaaga nolol ahaan adigoo rahaamad u ah bangigaada si aad u kordhiso qadarka deynta isla markaana kordhiso baaxadda deymankaada iyadoo loo marayo qiimaha dib u celinta.
Sumarka Caadiga ah: Tan waxaa ka mid ah faa iidooyinka ka soo iibinta suuqgeynta, keydinta xisaabaadka maalinlaha ee lacagta iyo, dabcan, lacagtaada. Si kastaba ha ahaatee, iibinta alaab-dhaafka ayaa kaliya kugu habboon, si kastaba ha ahaatee, haddii lagu iibsaday heer xiiso badan oo dayn ah ayaa lagu soo gabagabeeyey marxaladda dulsaarka hoose. Xaaladdan, dakhliga qayb ahaan wuxuu daboolayaa dulsaar deynta.
Sinaanta maaliyadda guriga
Markaad maalgeliso hantidaada, qiimaha saamigaaga ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaaraya. Saameyn badan oo aad u keeni karto, deynta aad u fiican ayaa xisaabaya hay'adda amaahdaada ku siinaysa. Sinnaanta aad adigu leedahay, waa yar tahay amaahashada waxaad u baahan tahay mashruucaaga. Waa run in dunidan maanta, amaahda amaahda raasumaalka oo aan raasumaal ahayn ayaa sidoo kale suuragal ah. Si kastaba ha noqotee, fursadahaagu waa ka fiicnaanshaha haddii aad caddayn karto oo aad ku dari karto ilaha maaliyadeed. Imisa lacag ah oo aad ku maalgeliso mashruuc aad ayuu u kala duwan yahay bangiyada iyo hay'adaha deynta. Waa inaad xisaabisaa saamiga 20 ilaa boqolkiiba 30.
Maqaalka xigtaamaah maalgashi